Mimosa Salad waziwa hhayi kuphela e-Russia kodwa futhi phesheya - lapho ibizwa khona ngokuthi "Russian." Ngokusho kwayo Mimosa kuphazanyiswa amasaladi adumile njengoba inhlanzi ngaphansi ijazi noboya futhi Olivier.
ukupheka kwakhe aluhileli eningi "utshalomali," kodwa kubukeka mnandi kakhulu nenhle, kubukeka efana ngempela izimbali mimosa iholide ngakho ezingavamile ephelele ngaphandle lokhu dish.
Mimosa iresiphi yaziwa ukusukela ngeminyaka yoma - uma yalungiswa kuphela ngamaholidi. Yonke imikhaya Mimosa ukwenza ngendlela yabo, futhi kanjalo mimosa iresiphi akusilo elilodwa kodwa amaningi, kodwa izingxenye eziyinhloko ziyafana - kungcono amaqanda, ushizi, nezinhlobo ezihlukahlukene zezinhlanzi njengabantu okusemathinini (salmon, tuna, salmon, saury) no-anyanisi kanye imayonnaise.
Esikhundleni inhlanzi okusemathinini ingasetshenziswa crab izinti noma crab inyama. izithako Ngaphezu kwalokho kukhona amazambane, irayisi, apula, izaqathe, ushizi kusetshenzwe, walnuts, ibhotela. Ukulungiselela ulethisi mimosa kunikeza indawo umcabango. Nakuba nobunzima ikakhulukazi ekuwulungiseleleni cha, kukhona ezinye tricks ubuqili.
Njalo wekhaya ungacabanga yakho, ozithandayo, futhi ngokuvamile esiyingqayizivele iresiphi mimosa. Ake sicabangele mimosa isaladi nelayisi. Ukupheka ke uzodinga zingxenye ezilandelayo: amaqanda 5-6, inkomishi irayisi, inhlanzi okusemathinini - 1-2 amabhange, izaqathe - 2-4 izingcezu, 150-200 amagremu of ushizi, anyanisi (mhlawumbe abomvu) - 1-2 izicucu futhi imayonnaise . Mimosa Recipe uvumele kwenkululeko ezinjalo, ngakho-ke ezinye izingxenye senkosikazi agqoke iso.
Lokhu isaladi is egqinsiwe ngakho kudingeka alungiselele kusendlalelo ngasinye ephambili. Okokuqala, kudingeka ubeke ukupheka irayisi, amaqanda kanye izaqathe, inqobo nje uma lezi izithako okuphekwe, ukugeza oqoshiwe onion. anyanisi lisikiwe kumelwe-scalded ngamanzi abilayo ukuze ilahlekelwe focus. irayisi abilisiwe ubizwa wageza ngamanzi abandayo kanye zishiywe colander. Futhi ukuhlanzwa amaqanda izikhupha ehlukanisiwe zabamhlophe. Amaphrotheni noshizi grate futhi ukuxubana. Khona-ke grate izaqathe abilisiwe.
Manje uqala ukulungiswa isaladi mimosa. On isidlo esikhulu ibekwe ungqimba wokuqala - lokhu Fig. Kumele angabekwa futhi basakaza nge imayonnaise. Isendlalelo yesibili ixubene amaprotheni ushizi. Yena, futhi, lenzelwa ngobuningi ezigcotshwe nge imayonnaise. ungqimba Okwesithathu - ungqimba izinhlanzi amathambo kulo zonke kumele ukhiphe kuqala ipulaki xova kuze eyohlobo. Lesi sendlalelo kuqondiswa futhi imayonnaise alisibekele, bese babeka ungqimba onion, futhi futhi imayonnaise. Isendlalelo esilandelayo sizobe izaqathe ogayiwe, futhi ngesandla esivulekile smear imayonnaise. Layer izikhupha ogayiwe uqeda isaladi. Kungcono ukubheka izikhupha elikhanyayo aphuzi. Ungakwazi uhlanganise izikhupha nge oqoshiwe anyanisi oluhlaza. Isendlalelo lokugcina elifakwe imayonnaise akudingekile, ngoba izikhupha ogayiwe lihlukaniswe nezinye isaladi. Ukuhlobisa amahlamvu isaladi ka parsley noma wafafaza amakhambi emhlabeni oqoshiwe, ulethisi wafaka esiqandisini cishe amahora amabili kuya izingqimba ofakwe. Ukuze uthuthukise ukunambitheka kusendlalelo ngasinye kudingeka usawoti ngokwehlukile.
Mimosa isaladi nelayisi isidingo eyolanda imayonnaise obukhulu, okungcono ulamula ukunambitheka, futhi ongaphakeme ukudla okwakha kanye imayonnaise ayifanele ukunambitheka kanye ukungaguquguquki yayo. Ngakho-ke, uma ungafuni bonakalise ukunambitheka isaladi, bawuthatha ngokungathí sina kukhethwa imayonnaise.
Kukhethwa imayonnaise ubuhlakani ungowokuqala ukuthola i isaladi esihle. Imfihlo kokwenza mimosa isaladi okumnandi wesibili kushintshana izingqimba. Abanye besifazane ukulungiselela isaladi mimosa ningaqali ne ungqimba irayisi, ungqimba izinhlanzi. Lokhu ayilungile, ngoba ukunambitheka izinga isaladi ukuwohloka.
Mimosa isaladi lizwakale kangcono uma zonke izingqimba ngaphandle izinhlanzi kanye anyanisi kuthiwa wagcoba on a grater emihle. isaladi kuthebula iholide kahle kudingeka ukukhonza. yasekuqaleni kakhulu isaladi mimosa ubukeka e ingilazi isaladi isitsha, lapho ungqimba ngalunye iyabonakala.
Parsley. Izakhiwo ezisebenzisekayo Izicelo
Zokupheka okumnandi for nsuku zonke, hhayi kuphela isaladi "Red Riding Hood"
Isaladi iresiphi "efaka ukuphila engozini Izenzo". Funda indlela ukupheka "efaka ukuphila engozini Izenzo"
Salad nge walnuts: uswidi nalelo ukunambitheka
Salad "Monkey": iresiphi, izeluleko ukubhalisa
'Levomekol' Wamafutha - isicelo izakhiwo, Izimo.
Kanjani ukuze uthole imali eningi: amathiphu 12 impumelelo
Geza izinwele - ukuphila e ukuhlolwa akuphumelelanga nezinwele umbala
Uhambo ku Volgograd: i Uhlolojikelele, izici kanye nokubuyekeza
Artesian Awu - kuyini? I-apharathasi begodu kahle ukusebenza Artesian
Yini ehlukanisa hob lokungeniswa kusukela amapayipi? Izinzuzo nezingozi nebubi amadivayisi ezifana
Dzhordzh Patton, iButho Lempi Lase-Jikelele: Biography, neminyaka yempi, imiklomelo
Aquaclub & Ihhotela Voda, Russia: ukubuyekezwa, izincazelo, izincazelo kanye nokubuyekezwa
"Omunye wezisulu entsha." Abalingisi abaye baba izithombe kwenkathi
Yikuphi ukudla ingalungiswa kusuka cod nezibopho
Iflophidiski: isakhiwo, emihle nemibi. Uyini iflophidiski?